Midowga Yurub: Waa in culeyska la saaraa bey’adda marka hay’aduhu wax soo iibsanayaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baarlamaanka Midowga Yurub oo fadhigiisu yahay Strasbourg, Faransiiska. Sawirle: Robert Henriksson/TT.
Midowga Yurub: Waa in culeyska la saaraa bey’adda marka hay’aduhu wax soo iibsanayaan
La daabacay onsdag 15 januari 2014 kl 09.49
Kolka ay maamulada degmooyinka iswiidhishku ay iibsanayaan badeecooyin iyo adeegyo, waa in ay ahmiyad weyn siiyaan bey’adda iyo heshiisyada shaqada. Sidaasi waxay ku qoran tahay sharci yurubiyaan ah oo ku saabsan iibsiga hay’adaha dowladda, sharcigaas oo uu maanta baarlamaanka u codeynayo. Jens Nilsson oo xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga u fadhiya baarlamaanka Midowga Yurub ayaa soo dhoweeyey isbeddelkaan:
– Waxaa sharcigaan ugu muhiimsan in awood tan hadda ka badan la siinayo hay’adaha ay iyagu wax iibsada. Waxaan ka fekerayaa dhammaan siyaasiinta degmooyinka dalka oo ku faraxsan in ay hadda awood u helayaan in ay adkeeyaan shuruudaha la xiriira arrimaha bulshada iyo arrimaha bey’adda. Arrintaan ku saabsan in la tixgeliyo heshiisyada suuqa shaqada waxay wanaajineysaa xuquuqda shaqaalaha. Waa guul aad u weyn oo dareen farxad leh wadata, ayuu yiri xildhibaankaan baarlamaanka Midowga Yurub Jens Nilsson (S).
Sannad walba waxay hay’adaha dowladda, iyo kuwa degmooyinka iyo goboladu ku bixiyaan ilaa 600 oo milyan oo akroon soo iibsiga badeecadaha iyo adeegyada. Sidaasna waxaa laga soo xigtay baaritaan dowladdu sameysey sannadkii la soo dhaafay.
Maanta waxaa la filayaa in baarlamaanka Midowga Yurub u codeeyo sharci cusub oo looga beddelayo iibsiga hay’adaha dowliga ah. Farqiga ugu weyn oo la arki doono ayaa ah in aysan hadda kadib ahmiyadda ugu weyni noqon doonin in la tixgeliyo oo qura qiimaha ugu hooseeya, sida marka maamul degmo soo iibsanayo cuntooyinka laga qaybiyo dugsiyada iyo xarumaha waayeelka, balse culeyska la saarayo shuruudo siyaasadeed marka ay degmooyinku go’aansanayaan cidda ay qandaraaska siinayaan.
Dhanka kale ururka shaqa-bixiyayaasha Almega ayaa qaba in ay qaali ku noqon doonto dadweynaha canshuurta bixiya maadaama aysan ahaan doonin in tixgelin la siiyo iibsiga dhaqaale ahaan ugu wanaagsan.
– Waxaa khatari ka iman kartaa in ay soo kordhaan shuruudaha in shirkadaha qaarkood albaabada laga xirto, taasina ay noqoneyso dhibaato weyn. Sidaasna waxaa yiri Stefan Holm oo Ururka Almega u ah khabiir qaabbilsan siyaasadda ganacsiga.
Midowga Yurub ayaa isagu ku doodaya in sharcigaan cusubi uu fududeynayo qaababka wax kala iibsiga, oo sidoo kalena ay u sahleyso shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe in ay fursad u helaan in ay ku guuleystaan qandaraasyada ay degmooyinka wax uga iibinayaan. Xildhibaanka baarlamaanka Midowga Yurub Jens Nilsson ayaa qaba in haddii culeyska la saaro shuruudaha bey’adda ay taasi toos faa’iido ugu leedahay shirkadaha iswiidhishka.
– Waxaan aad ugu wanaagsanahay arrimaha bey’adda iyo cimilada la xiriira. Sidaas awgeed laga yaabee in ay shirkadaha ku xisaabtamaan shaqooyin ay ka abuuraan dalalka kale ee Yurub.
Kadib marka sharcigaan cusub loo codeeyo, waxay dalalka Midowga Yurub haystaan laba sano oo ay sharcigaan cusub oo ku saabsan iibsiga ay u beddelaan sharci qaran.